Fijoroana Vavolombelona Nataon’ny Gineana Iray Mpitoraka Bilaogy Mikasika Ireo Fanararaotan’ny Polisy Eny Sisintany Ataony Amin’ny Anaran’ireo Fepetra Manohitra Ny Fampihorohoroana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 10 Janoary 2016 3:12 GMT
Vakio amin'ny teny Ελληνικά, English, Italiano, Español, 繁體中文, 简体中文, عربي, Français
Dieretou Diallo, Gineana mpitoraka bilaogy. Nahazoany alalana.
Gineana iray mpianatra sady mpitoraka bilaogy, Dieretou Diallo, monina any Nice, Frantsa, no niaina zava-mahamenatra nandritra ny fialàny tao Parisy ho any Dakar mba handray anjara amin'ny fandefasana any Dakar, ny 28 Novambra 2015 teo, ny Afrikctivistes, ligy Panafrikan”ireo mpikatroka ho an'ny Demokrasia. Mitantara ny fahasorenany tao amin'ny bilaoginy “De vous à moi”, izy:
Niakatra ho any Dakar, loza. Sendra ny mpiasa iray amin'ny fadin-tseranana, feno fankahalàna sy mpanavakavaka, aho. Tsy noeritreretiko ny hitovy amin'ny olona mahery fihetsika tao anatin'ny patalohako jean mifinjifinjy, sy ny ambonin'ankanjoko mihanjahanja ary ny kiraro maivana tokony ho 10 cm. Kanefa izaho no toa anton'ny fisavàna, mahatsiravina, ary tsy lavitry ny fanararaotam-pahefana miaraka amin'izato fehezanteny fanaovana tsinontsinona nalefa noho ny tsy fananako faharetana: “Afaka maka fotoana araka izay tiako aho, afaka mandidy aho mba hampidinana avy ao anaty fitoeran'entana ireo entanao ireo mba ho savaina tsy mila fanazavana, ataoko izany raha tiako ary ho tara fiaramanidina eo ianao dia izay ihany”. Nijery ahy tamin'ireo maso vinitra izy: “Miteny frantsay ianao sa tsia?” Izay novaliako bontana teo noho eo”: Tsy haiko, andramo dia ho hita.”
Hita ny anton'ny fifamalianay. Fanontaniana lalindalina : ny anton'ny diako, faharetany, antony hankanesako any Frantsa, daty nahatongavako tao Frantsa sy ny hafa tsy ho tanisaiko. Naverina tsara avy any amin'ny fitoeran'entana ny entako tany anaty fiaramanidina, voajery tamin'ireo lafiny rehetra ny pasipaoroko, naongana ambony ambany ireo kiraroko, fomba hitiliana sao misy zavatra miafina ao anatiny, nojerena tamin'ny antsipirihany ny kitapo kely misy ny fihaingoko.
Sosotra, nandroso tamim-paharomontana aho: “Sao dia tianareo mihintsy ny hitanjahako?” Manana endrika mpampihorohoro angaha aho?”. Tsy nanaikinaiky fotsiny aho ary io no nahatezitra azy satria nanao tsinontsinona ny fahefana mahonena saika nasehony, nandrahona izy, nisafoaka aho: “Tiako ho vita haingana ireo fianarako dia hiala eto aho”. Mamaly izy: “Eny izany mihintsy, ndehana daholo!”. Tsiky maneso, novaliako izy fa hijanona aho, mba hanome fo fotsiny ireo olona toa azy no antony. Safotry ny hatezerana aho, tsy fahafaha-manoatra. Fimonomononana tsy misy dikany natao nandritry ny dimy amby efapolo minitra mahery, mivezivezy etsy sy eroa mampitomany, tsy manana hery enti-miady aho amin'io fotoana io. Farany hitako ny hevitra handefasana ny hoe: “Raha lasa ny fiaramanidina, ary tsy mahita na inona na inona ao anaty entako ao ianao, tsy tompon'ny tenako aho. Hanao tantara ratsy aho, tsy raharahako na ho any amin'ny komisaria aza. Vao avy namoy ny raiko aho ary ny zavatra izay ilaiko farany, dia ny fitondràna ahy ho toy ny tsy misy antony.”